Karl Barth: THE HADHKA Kaniisada, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Caalimka reer Switzerland Karl Barth waxaa loogu yeeraa fiqiga fiqi ahaaneed ee ugu casrisan uguna caansan waqtiga casriga. Pope Pius XII (1876-1958) Barth waxa loogu yeedhay fiqiga ugu muhiimsan tan iyo Thomas Aquinas. Aragti kasta oo aad ka aragtid isaga: Karl Barth wuxuu saameyn weyn ku yeeshay hoggaamiyeyaasha kaniisadaha casriga ah ee Christian iyo aqoonyahanno ka soo kala jeeda dhaqanno kala duwan.
Sannadaha heshiiska waxbarasho iyo xasaradda iimaanka
Barth wuxuu ku dhashay May 10, 1886, at sare ee saamaynta of fiqi ahaan xorriyadda ee Europe. Wuxuu ahaa arday iyo xerta Wilhelm Herrmann (1846-1922), oo ah wakiilka ugu sarreeya waxa loogu yeero fiqiga cilmu-nafsiga, kaas oo ku saleysan khibradda shakhsi ahaaneed ee Eebbe. Barth wuxuu ka qoray isaga: Herrmann wuxuu ahaa macalinka fiqi ahaaneed ee maalmahayga ardayda. Sanadihii hore horaantiina Barth wuxuu raacay sidoo kale waxbarista caalimka caalimka ah ee reer Jarmal Friedrich Schleiermacher (1768-1834), oo ah aabaha fiqiga casriga ah. Waxaan u hibeeyay inaan siiyo macno weyn oo ku saabsan guud ahaan guddiga, ayuu qoray. 
1911-1921 Barth wuxuu wadaad u ahaa bulshada dib u habeynta Safenwil ee Switzerland. Qormooyin tilmaamaya in 93 aqoonyahano reer Jarmal ah ay kahadleen doorka dagaalkii Wil Wilhelm II ee ujeeddadiisu ahayd dagaalka ayaa ruxday aasaaska dhismihii caqiidadiisa xorta ah bishii Agoosto 1914. Aqoonyahanada cilmiga fiqiga ah ee uu qadariyo Barth ayaa iyagana ka mid ahaa saxiixayaasha. Waxay soo saartay adduun dhan tafaraaruq, akhlaaqeed, hiillooni iyo khudbado aan horay u aaminsanahay inay tahay mid aasaasi ah oo la isku halleyn karo ... waxay ka tanaasuleen aasaaska, ayuu yidhi.
Barth wuxuu rumeysan yahay in macallimiintiisu khiyaaneeyeen diinta masiixiga. Adigoo u beddelaya injiilka qoraal, diin, ku saabsan aragtida Masiixiyiinta, mid ayaa ka waayey Ilaah, kaasoo qofka ka hor yimaadda xukunkiisa, wuxuu weydiisanayaa xisaabti isaga ka timaada oo wuxuu ugu dhaqmaa sidii Rabbi.
Eduard Thurneysen (1888-1974), wadaad tuulo deris ah iyo saaxiibkiis Barth saaxiibkiis ahaa maalmihiisii ​​ardayda, waxaa soo maray dhibaato la mid ah iimaanka. Maalin maalmaha ka mid ah Thurneysen wuxuu waraysanayay Barth: Waxa aan ugu baahanahay wacdinta, waxbarista iyo daryeelka daaqsinta waa aasaaska fiqi ahaaneed ee 'gabi ahaanba ka duwan'. 
Si wada jir ah ayey ugu halgameen sidii ay aasaas cusub u heli lahaayeen fiqiiga Masiixiga. Markaad baraneyso cilmiga fiqi ahaaneed mar labaad, waxay muhiim ahayd in lagu bilaabo akhriska iyo tarjumidda qoraallada Axdiga Hore iyo Axdiga Cusubi si ka taxadir badan sidii hore. Oo bal eeg, oo waxay arkeen inay nala hadlayeen ...  Ku noqoshada asalka injiilka waxay ahayd lagama maarmaan. Hawshu waxay ahayd in dib loo bilaabo marwalba iyadoo jihayn cusub oo gudaha ah iyo in mar labaad loo aqoonsado Ilaah inuu yahay Ilaah.
Warqad ku socota Roomaanka iyo Dogmatics-ka kiniisadda
Sannadkii 1919-kii falanqayntiisii ​​cususayd ee Barth ee Der Römerbrief ayaa soo baxday oo gabi ahaanba dib loo eegay 1922 si loo helo daabacaad cusub. Waraaqadiisa dib loo eegay ee loogu talagalay dadka reer Rooma waxay dejisay nidaam fiqi ah oo cusub oo geesinimo ah kaas oo Ilaah, si fudud, isaga oo ka madax bannaanaaday dadka, oo bal eega tayda. 
Barth wuxuu ka helay duni cusub warqaddii Bawlos iyo qoraalkii kale ee Baybalka. Adduunyo taas oo fikradaha saxda ah ee Ilaah ayan mar dambe muuqan, laakiin fikradaha saxda ah ee Ilaah ee ku saabsan dadka.  Barth wuxuu caddeeyay in Ilaah uu aad uga duwan yahay, oo ka sarreeya fahamkeenna, wuu inala jiraa, taasi waa ajnabiga dareenkeenna oo waxa lagu garan karaa oo keliya Masiixa. Ilaahnimadiisa si sax ah loo fahmay waxa ka mid ah: bini aadamnimadiisa.  Cilmiga fiqigu waa inuu noqdaa caqiido ilaahay iyo dad ah. 
Sannadkii 1921-kii Barth wuxuu borofisar ka noqday cilmiga fiisigelinta ee Göttingen, halkaas oo uu wax ku baray ilaa 1925. Bartiisa ugu weyni waxay ahayd khiyaanayn, taas oo uu u arkay inay tahay mid ka tarjumaysa Erayga Eebbe oo ah waxyi. Qorniinka iyo wacdiga masiixiga ... waxaa lagu qeexay wacdinta Masiixiga ee dhabta ah. 
Sanadkii 1925 waxaa loo magacaabay borofisar cilmu-nafsiga ah iyo qormooyinka Axdiga Cusub ee Münster iyo shan sano kadib wuxuu gudoomiye u ahaa cilmiga fiqiga ee Bonn, oo uu qabtay ilaa 1935.
Sanadkii 1932 wuxuu daabacay qeybta koowaad ee Dogmatics Church. Dhirtan cusub waxay ka soo kacday muxaadarooyinkeeda sanadba sanadka ka dambeeya.
Dhakhaatiirtu waxay leedahay afar qaybood: Barashada Ereyga Eebbe (KD I), Doctrine of God (KD II), Doctrine of Hal abuurka (KD III) iyo Casharkii Dibuheshiisiinta (KD IV). Qaybaha mid waliba wuxuu ka kooban yahay dhowr mug. Barth asal ahaan waxay shaqada u habeysay shan qaybood. Isagu mar dambe buu dhammayn kari waayey qaybtii dib-u-heshiisiinta, qaybtii furashada ayaa sii socota oo aan qornayn dhimashadiisa ka dib.
Thomas F. Torrance wuxuu ugu yeeraa 'Barth's dogmatics' illaa ugu sarreeya uguna cajiibka badan ee ku biiriya fiqiga nidaamsan ee casriga. KD II, cutubka 1 iyo 2, gaar ahaan barida in Eebbe ficil ahaanta iyo sameynta Eebbe ahaanshadiisa, wuxuu u arkaa inuu yahay soo afjarida khiyaanooyinka Barth. Indhaha Torrance, KD IV waa shaqada ugu awoodda badan abid ee lagu qoro aragtida kafaaraggudka iyo dib-u-heshiisiinta.
Masiixa: La Doortay iyo La Doortay
Barth wuxuu caqiidada Masiixiyada oo dhan ku dhaleeceeyay dhaleecayn xag jir ah iyo dib-u-fasiraad iftiinka abuurkii. Wuxuu qoray: Shaqadayda cusub waxay ahayd inaan dib uga fiirsado oo aan dhaho waxkastoo aan horey u iri, hadda sidii fiqiga nimcada Eebbe ee Ciise Masiix.  Barth wuxuu rabay inuu helo wacdinta masiixiga isagoo ah ficil ku dhawaaqa ficilka xoogga leh ee Ilaah ee ma aha ficillada iyo ereyada dadka.
Masiixu wuxuu udub dhexaadka u ah iskudhafista bilowga ilaa dhammaadka. Karl Barth wuxuu ahaa caalim fiqi ah oo masiixi ah kaasoo markii hore kahadlaya midnimada iyo wada jirka Masiixa iyo injiilkiisa (Torrance). Barth: Haddii aad midba midka kale halkan ku dhaafto, gebi ahaanba waad gaftay.  Qaabkan iyo xididdada Masiixa ayaa ka badbaadisay inuu ku dhaco dabinka cilmiga dabiiciga ah, kaas oo ku oggolaanaya awoodda sharciga ah farriinta iyo qaabka Kaniisadda dadka.
Barth wuxuu ku adkaystay in Masiixu yahay muujinta iyo dib-u-heshiisiinta uu Ilaah kula hadlay dadka; ereyada Torrance, meesha aan ku aqoonsanno aabaha. Eebbe ayaa kaliya aqoonsan, Ilaah Barth ayaa dhihi jiray.  Bayaanka ku saabsan Ilaah waa run haddii ay waafaqsantahay Masiixa; inta u dhaxaysa Ilaah iyo ninku waxay taagan yihiin shakhsiyadda Ciise Masiix, xitaa Ilaah iyo xitaa nin dhex dhexaadin kara labada. Masiixa Ilaah baa isku muujiyay dadka; arag isaga oo isagu wuu yaqaan nin Ilaah.
Fikraddiisa saadaalintiisa, Barth wuxuu ka bilaabmay doorashada Masiix qaab laba jibaar ah: Masiixu wuxuu doortay isla mar ahaantaana la doortay. Ciise maahan kan la doortay oo keliya, laakiin sidoo kale ninka la doortay.  Sidaa darteed doorashadu waa inay si gaar ah ula sameysaa Masiixa, kaas oo doorashadiisa aan ku dooranay - isaga ka qeybqaado. Marka loo eego doorashada dadka - sida uu sheegayo Barth - doorashada oo dhan waxaa lagu qeexi karaa oo keliya nimco xor ah.
Dagaalkii labaad ee aduunka kahor iyo kadib
Sanadihii Barth ee Bonn wuxuu ku soo beegmay korodhka iyo la wareegida Adolf Hitler. Dhaqdhaqaaq kaniisad qaran oo hantiwadaag ah, Masiixiyiintii Jarmalka ahayd, waxay isku dayeen inay sharci ka dhigaan Fiihrer sida badbaadiyaha Ilaahay u soo diray.
Bishii Abriil 1933 Kaniisadda Evangelical-ka ee Jarmalka waxaa la aasaasay iyada oo ujeeddadeedu tahay kor u qaadida aqoonta Jarmalka ee ku saabsan isirka, dhiigga iyo ciidda, dadka iyo gobolka (Barth) oo ah aasaaska labaad iyo isha waxyiga Kaniisadda. Kaniisadda Qirashada waxay u soo baxday dhaqdhaqaaq lid ku ah, oo diidey fikirka wadaninimo iyo fikirka ku saleysan aadanaha. Barth waxay ahayd mid ka mid ah tiirarkeeda hoggaamineed.
Bishii Meey 1934 waxay daabacday Baaqa caanka ah ee Barmer Theological Declaration, kaas oo inta badan ka imanaya Barth oo ka tarjumaya fiqiisnimadiisa la xiriirta Masiixa. Lix qodob, bayaanku wuxuu ugu baaqayaa kaniisadda inay si gaar ah diiradda u saarto muujinta Masiixa oo aan ku dhisnayn awoodaha iyo awoodaha aadanaha. Ka baxsan hal ereyga Ilaah ma jiro il kale oo loogu dhawaaqo Kaniisadda.
Bishii Nofembar 1934, Barth wuxuu lumiyay liisankiisii ​​waxbarashadda ee Bonn kadib markii uu diiday inuu saxeexo dhaar aan shuruud lahayn oo uu ugu ballanqaaday Adolf Hitler. Si rasmi ah xilka looga xayuubiyey bishii Juun 1935, wuxuu markiiba wacay Switzerland isagoo ku takhasusay cilmiga fiqiga ee Basel, oo ah jago uu qabtay illaa uu ka fadhiisto hawlgabkii 1962.
Sanadkii 1946, dagaalkii kadib, Barth waxaa mar kale lagu casuumay Bonn, halkaas oo uu ku qabtay muxaadarooyin taxane ah oo lagu daabacay sanadka soo socda isagoo ah Dogmatics in the Demolition. Buuggu wuxuu ku dhisan yahay qawaaniinta 'rasuullada', buuggu wuxuu ka hadlayaa mowduucyo uu Barth ku soo qaatay diintiisa aasaasiga ah ee cilmiga leh.
Sannadkii 1962, Barth wuxuu booqday Mareykanka wuxuuna khudbado ka qaatay Seminary Seminary Princeton iyo Jaamacadda Chicago. Markii la waydiiyey inuu si kooban u soo koobo macnaha fiqi ahaaneed ee malaayiinta kalmadood ee ku jira Dogmatics-ka kiniisadda, waxa la sheegay inuu in yar ka fikiray ka dibna yidhi:
Ciise wuu i jecel yahay, taasi waa hubaal. Sababtoo ah waxay muujineysaa qoraalka. Haddii xigashada ay run tahay iyo in kale: Barth ayaa badanaa ka jawaaba su'aalaha sidan oo kale ah. Waxay ka hadlaysaa aaminaadiisa aasaasiga ah ee xudunta injiilku waa farriin sahlan oo tilmaamaysa Masiixa inuu yahay Bixiyahayaga, kan inaga jecel jacaylka guud ee rabaani ah.
Barth uma uusan fahmin kacaankiisa kacaanka inuu yahay erayga ugu dambeeya ee fiqiga, laakiin furitaanka dood cusub oo guud.  Si qunyar socod ah, qasab ma ahan inuu u oggolaado shaqadiisa inay weligeed sii jirto: meel ku taal rabitaanka jannada waxaa ugu dambayn loo ogolaan doonaa inuu ku kaydiyo sheekooyinka kaniisadda ... warqad warqad qashin ah.  Khudbadihi ugu dambeeyay wuxuu ku soo gaba gabeeyay in fikradihiisa fiqi ahaaneed ay horseedi doonaan dib u eegis mustaqbalka, maxaa yeelay Kaniisada waxaa ku qasbay inay markale bilawdo eber maalin kasta, saacad kasta.
Markay ahayd Disember 12, 1968, Karl Barth, 82 jir, wuxuu ku dhintay Basel.
Karl Barth, Insaanka Eebbe. Biel 1956
Karl Barth, Dogmatics Church. Vol. I / 1. Zollikon, Zurich 1952 ditto, Vol. II
Karl Barth, Waraaqda loogu talagalay dadka Roomanka. Nooca 1aad. Zurich 1985 (iyada oo qayb ka ah Daabaca Dhameystiran ee Barth)
Karl Barth, hilmaamiyaadyada duminta. Munich 1947
Eberhard Busch, Karl Barth ee CV. Munich 1978
Thomas F. Torrance, Karl Barth: Kitaabka Qudduuska ah iyo The wacdiga ah ee wacdiga. T. & T. Clark 1991
1 Xaragada, bogga 56
2 Xaragada, bogga 52
3 Waraaq ku socota dadka Roomanka, Dib-u-habeynta, bogga IX
4 Xaragada, bogga 120
5 Busch, pp 131-132
6 Xaragada, bogga 114
7 Xaragada, bogga 439
8 Xaragada, bogga 440
9 Xaragada, bogga 168
10 Xaragada, bogga 223
11 Xaragada, bogga 393
12 duur, passim
13 Xaragada, bogga 315
14 Xaragada, bogga 506
15 Xaragada, bogga 507